Tranombakoka enina maimaim-poana any Berlin | Vaovao momba ny dia
Tranombakoka enina maimaim-poana any Berlin
Mariela Carril | | Berlin, Tsangatsangana
Milaza izany izy ireo Berlin dia tanàna tsara ho an'ny mpitia mozeaFa mazava ho azy, raha mila mandoa saram-pidirana ho an'ny tsirairay ianao, dia hiakatra ny tetibola. Tandremo anefa, misy vaovao tsara satria tsy ny tranombakoka rehetra ihany koa no aloa misy tranombakoka maimaim-poana betsaka any Berlin.
Ka raha kely sy kely ny zavatrao, tranombakoka kely ary fotoana kely ary saina malalaka, azonao atao izany soraty ity lisitra ity Eny, misy tranombakoka isan-karazany, na dia ny tena mahaliana aza dia mifantoka amin'ny Ady Lehibe Faharoa sy ny Ady mangatsiaka manaraka. Tsy ratsy ho an'ny tanàna izay manana tantara mahavariana ary izay no mpiorina amin'ireo loza lehibe tamin'ny taonjato faha-XNUMX.
2 Fahatsiarovana Holocaust
3 Fahatsiarovana an'i Wall Wall
4 Museum of the Allies
6 Topografikan'ny fampihorohoroana
Raha tianao ny tantaran'i Berlin mizara roa amin'ny Andrefana sy Atsinanana dia toerana tsara hanombohana izany. Mandra-pahatongan'ny fianjeran'ny rindrina Ity trano miorina ao amin'ny gara Friedrichstrasse ity dia niampita sisintany. Fihohonana, tomany ary veloma no natao ka io anarana io tränsenpalast misy dikany: lapan'ny ranomaso.
Ny trano vy sy vera tany am-boalohany dia natsangana tamin'ny 1926 hatramin'ny 1990 io no dingana tsy maintsy atao avy any atsinanana ka hatrany andrefana. Hatramin'ny volana septambra lasa teo dia nisy fampirantiana natokana indrindra ho an'ireo traikefa amin'ny sisin-tany tany Alemana nizarazara tamin'izany fotoana izany. Misy ny resadresaka ifanaovana amin'ny vavolombelona, ​​antontan-taratasy, horonantsary, zavatra tany am-boalohany tamin'ny fiainana isan'andro an'ny Berliners sy ny maro hafa.
Any Reichstagufer no misy azy, 17. Misokatra ny talata ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 7 hariva ary amin'ny faran'ny herinandro amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva. Nakatona ny alatsinainy. Maimaimpoana ny fidirana.
Ao amin'ny Cora-Berliner Street no misy an'io memorial maoderina vita amin'ny andry beton io, ny Fahatsiarovana ireo Jiosy nisy namono tany Eropa nandritra ny fitondrana nazia. Misy akaikin'ny vavahady Brandenburg ary misy olona afaka mamakivaky azy amin'ny lafiny rehetra. Manana velaran-tany 19 metatra toradroa izy ary ny andrina dia nataon'i Peter Eisenmann, mpanao mari-trano any New York. Samy manana ny lanjany ary manana firongany kely ny tanety.
Eo ambanin'ny fahatsiarovana misy ivon-toerana fampahalalana 800 metatra toradroa, nataon'ilay mpanao mari-trano iray ihany, izay mazava ho azy ny iray dia mahafantatra ny momba ny Famonoana Tambabe. Vondron'olona lehibe dia afaka mandray anjara amin'ny atrikasa manokana ka mety amin'ny fitsidihanao dia mahita vondrona ankizy mpianatra ianao. Na dia malalaka aza ny fidirana raha mila ilay audio audio ianao dia mandoa vola fanampiny Mihena 50% izany raha manana ny Karatra Fampiarahabana any Berlin ianao.
Ny fahatsiarovana dia misokatra manomboka ny volana aprily ka hatramin'ny septambra ary ny talata ka hatramin'ny alahady amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 8 alina. Manelanelana ny volana oktobra sy martsa dia misokatra ny talata ka hatramin'ny alahady amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 7 hariva. Tsy navelany hiditra ianao alohan'ny 45 minitra aorian'ny fanidiana.
Fahatsiarovana an'i Wall Wall
Izany dia faritra amin'ny rindrina malaza fa notehirizina mba hitahiry marina ny dikany. Any Calle Bernauer, 111, eo afovoan'ny renivohitra io. eFA efa ho iray kilaometatra ny halavany ary manome hevitra ny amin'ny rindrina nampisaraka ny tanàna hatramin'ny faran'ny taona 80.
Misy ivontoerana mpitsidika sy antontan-taratasy Misokatra ny talata ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva. Misokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 10 hariva ny fampirantiana an-kalamanjana sy ny zaridaina fahatsiarovana ary azo zahana ny fampirantiana Phantom Stations Exhibition, ny fiantsonana eo amin'ny sisintany manelanelana ny faritra roa amin'ny Berlin, raha mbola misokatra kosa ny gara Nordbahnhof. Misy ny fitsidihana sy seminera ary raha manana finday avo lenta na takelaka misy fidirana Internet ianao dia afaka mampiasa fitsidihana manokana amin'ny fisafidianana izany amin'ny tranokala ofisialin'ny fahatsiarovana.
Raha mitsidika ny tranokala ianao dia afaka manao izany koa misintona PDF misy fampahalalana ilaina amin'ny fitsidihana.
Museum of the Allies
Ny miaramila amerikana dia nibodo ny ampahan'ny Berlin sy ny teatra fiasan'ny o baiko afovoany Tany amin'ny a aho tamin'izay sinema taloha berlin izay miasa ankehitriny amin'ny Museum of the Allies. Izy io dia fijerena tsara ny tantara taorian'ny ady, teo anelanelan'ny 1945 sy 1989. Eo amin'ny Clayalee Street, 135. Tonga eo u-Bahnn ianao, U3 dia miainga ao Oskar-Helene Heim na amin'ny bus, ny zotra 115 na X83.
Hatramin'ny volana Mey tamin'ity taona ity dia misy fampirantiana momba ny fomba nanatanterahana ny dingan'ny de-Nazification an'i Alemana tamin'ny faran'ny ady, ohatra, misy ny fitsangatsanganana, ny famakiana, ny atrikasa, ny fampirantiana maharitra ny antontan-taratasy sy ny zavatra tany am-boalohany, sary, arisivan-tsary ary raha tsy izany.
Maimaimpoana miditra ity tranombakoka ity ary sokafy isan'andro raha tsy ny alatsinainy eo anelanelan'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva. Ny fitsangatsanganana an-tsokosoko dia misy lohahevitra samihafaNy fomba nananganana ny fiaramanidina tany Berlin, ny fomba fiasan'ny Allied Intelligence Service tamin'ny fotoanan'ny Ady mangatsiaka, ny zava-nitranga tao anatin'ny Post Charlie, izay nazi, ny fomba nonenan'ireo Amerikanina tao an-tanàna, sns. Amin'ny fiteny maromaro izy ireo na dia indrisy fa tsy amin'ny Espaniola.
Ity trano kanto ity dia ao amin'ny distrikan'i Nikolai ary iray amin'ireo tsara tarehy indrindra tao an-tanàna. A tranobe barozy avo telo heny naorina tamin'ny 1760 avy amin'ity fianakavian'ny mpivarotra, mpanao mari-trano, mpahay siansa ary mpanao politika. Ity dia fomba maoderina handinihana ny lasa satria namboarina ny efitranony ary toa ny taloha ihany ny endriny. Indrindra ireo efitrano amin'ny rihana voalohany natokana ho an'ny fianakavian'i Knoblauch.
Efa eo amin'ny rihana faharoa misy sary hosodoko, zavatra isan'andro sy antontan-taratasin'ny fianakaviana momba ny maritrano, ny politika, ny fiainana ara-tsosialy. Misy taratasy ara-tantara, hetsika fanaon'ny fianakaviana Berlin iray tamin'izany fotoana izany ary zavatra hafa mamela antsika hanao izany dia lavitra liana be. Amin'ny làlambe Posttrasse 23 io. Maimaimpoana ny fidirana nefa ekena ny fanomezana. Manomboka amin'ny talata ka hatramin'ny alahady manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva.
Manondro an'io ny anarana tranom-bakoka izay izy io dia miasa ao amin'ny tobin'ny SS taloha. Raha misy zavatra mifandraika amin'ny Terror of State dia ny SS. Azonao jerena ao amin'ny Niederkirchnerstrasse 8. Niasa teto ihany koa ny Gestapo, ny Security Service ary ny Main State Security Office. Hitanao eo akaikin'ny Kianja Potsdamer izany.
Misy antontan-taratasy mamela antsika hahafantatra ny tantara sy hetsika nataon'ireny andrim-panjakana ireny, izany no atao hoe ny fampirantiana ny Topography of Horror, fa misy iray hafa izay maharitra ihany koa mifantoka Ny andraikitr'i Berlin amin'ny maha renivohitry ny Reich Fahatelo. Ho hitanao ny ampahany amin'ny rindrin'i Berlin izay nandalo tao sy olona maro, satria iray amin'ireo tranombakoka be olona indrindra ao an-tanàna izy io. Manomboka amin'ny Alatsinainy ka hatramin'ny Alahady manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 8 alina. Misokatra hatramin'ny 8 hariva ny faritra ivelany na mandra-pilentiky ny masoandro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Berlin » Tranombakoka enina maimaim-poana any Berlin
Ahoana ny fomba handaminana ny dia sy izay ho hitanao ao Bruges
Farihy fito miloko toa any amin'ny planeta hafa